मृत्यु पछि पनि जीवित रहनेछन् यी ८ बलिउड कलाकार ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > मनाेरंजन > मृत्यु पछि पनि जीवित रहनेछन् यी ८ बलिउड कलाकार !
May 31, 2020 May 31, 2020 GRISHI173
काठमाडौँ /पर्दामा कसैसँग भेट हुनु, बिछोडिनु, कोही गुमाउनु, टाढिनु र मृत्युको किस्सालाई बडो कलात्मक सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिन्छ।
वास्तविक जीवनमा यी सारा चीजहरु भोग्नु उत्तिनै कठिन काम हो। ठुला-ठुला चर्चित हस्तीहरु जो पर्दामा साहसिलो र हिम्मतिलो रुपमा देखिन्छ, उनीहरुमा पनि आफ्नो भावी समयबारे डर हुन्छ।
पर्दामा निर्जीव चरित्रलाई सजीव तुल्याउन ज्यान जोखिममा डाल्न हरपल तत्पर रहने केही कलाकारहरुले आफ्नो मृत्यु पछि पनि दोस्रो व्यक्तिको माध्यमबाट जिन्दगी जिउने फैसला गरेका छन्। यसको मतलब उनीहरुले आफ्नो अंग दान गर्ने अठोट गरेका छन्।
संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन
एसईईमा करिश्मा ﻿
March 24, 2019 March 25, 2019 Raju Thapa